ဗဟုသုတ – ချယ်ရီပန်း
တက္ကစီ စီးတယ်ဆိုတာ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ လူတန်းစားမရွေး ပါပဲ။ အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေမို့လို့၊ မြန်မြန်ရောက်ချင်လို့၊ မိုးရွာနေလို့ စတဲ့…အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့ လူတိုင်းက တက္ကစီ စီးတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်က မြန်ချင်လို့စီးကာမှ လမ်းမသိတဲ့ တက္ကစီသမားတွေ၊ တစ်ခါတစ်လေလည်း ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းကြံဖို့ ကြိုးစားကြတဲ့ တက္ကစီသမားတွေနဲ့ ကြုံရပြီး စိတ်ရှုပ်ရ၊ ဒုက္ခရောက်ကြရပါသေးတယ်။ များသောအားဖြင့် တက္ကစီ စီးတဲ့ ခရီးသည်တွေအနေနဲ့ တက္ကစီ သမားတွေဆီကနေ မကြားချင်ဆုံး စကား(၃)ခွန်းရှိပါသတဲ့။ အဲဒီစကားတွေကိုကြားရင် လုံးဝကို စိတ်ပျက်သွားကြတာမျိုး၊ စိတ်ရှုပ်သွားကြတာမျိုးပေါ့။ ဘယ်လိုစကားတွေလဲသိလား။ (၁)။ “အဲဒီဖက် လမ်းမကြုံလို့” လမ်းမကြုံဘူးလို့ ပြောရအောင် ကိုယ်တွေက လမ်းကြုံလိုက်စီးနေတာလည်းမဟုတ်။ တကယ်ဆို ကိုယ်က ကားသိမ်းတော့မယ်ဆိုရင် ကားသိမ်းတော့မယ့်အကြောင်းနဲ့ အပြန်လမ်းနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းကို အေးအေးဆေးဆေးပြောပြသင့်တာပါ။ အဲလိုမဟုတ်ပဲ လမ်းမကြုံလို့ မလိုက်ဘူးဆိုတာကြီးကတော့ […]
By admin June 7, 2019 June 8, 2019 No Comments
အရှေ့တောင်အာရှမှာ နတ်သုဒ္ဓါအဖြစ်တင်စားထားကြတဲ့ အသီးတစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ဒူးရင်းသီးပါ။ တော်တေ်ာများများကတော့ ဒူးရင်းသီးစားရင် သွေးတိုးတယ်၊ အနံ့စူးရှလွန်းလို့ ခေါင်းကိုက်တယ်လို့ပဲ သိထားကြပမေယ့် သင်တို့မသိသေးတဲ့ ဒူးရင်းသီးစားခြင်းကြောင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါင်း များစွာရှိနေပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှ ဒူးရင်းသီးနဲ့လုံးဝမဆက်စပ်မိတဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုး ၅ ခုကို ဖော်ပြပေးသွားမှာမလို့ ဗဟုသုတရအောင် ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြပါဦး။ ဒူးရင်းသီးမှာပါတဲ့အာဟာရဓာတ်များ USDA National Nutruent Database ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ဒူးရင်းသီးမှာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ ဗီတာမင်တွေနဲ့သတ္တုဓာတ်တွေ အများကြီးပါဝင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လုံးဝမထင်ထားတဲ့ ဗီတာမင် စီ ကို တွေ့ရပြီး ဖောလစ်အက်ဆစ်၊ thiamin ဓာတ်၊ riboflavin, niain အပြင် ဗီတာမင် အေးနဲ့ B6 တို့လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ပိုတက်ဆီယမ်၊ သံဓာတ်၊ ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဆိုဒီယမ်၊ သံဓာတ်နဲ့ ဖော့စ်ဖောယက်တို့ကိုလည်း ဒူးရင်းသီးထဲမှာ ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ရေဓာတ်နဲ့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရောဂါတွေ ကာကွယ်ပေးတဲ့ phytonutrients, ပရိုတင်းနဲ့ အကျိုးပြုအဆီတွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ (၁) ဒူးရင်းသီးနဲ့အစာချေစနစ် […]
By admin June 3, 2019 June 3, 2019 No Comments
အခုဇွန်လဟာ LGBT အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ လဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေက သူတို့ရဲ့လိုဂိုတွေမှာ သက်တန့်ပုံစံ LGBT အမှတ်အသားကို တင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်ဒိုနီးရှားမှ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးကတော့ တော်တော်လေးကို ထူးဆန်းတဲ့ မှတ်ချက်တစ်ခုကို ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကလေးတွေကို အသင့်စားခေါက်ဆွဲခြောက်နဲ့ နို့မှုန့်ဖော်မြူလာ တို့က လိင်တူချစ်သူ အဖြစ် ပြောင်းလဲစေတယ် ဆိုတာပါပဲ။ မြို့တော်အဆင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုမှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ တန်ဂါရန်းမြို့တော်ရဲ့ အာရစ်ဖ် ဝစ္စမန်းရှားက အင်ဒိုကလေးငယ်တွေကို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီး ထူးချွန်ထက်မြက်စေဖို့ အားလုံးက အစက အာဟာရဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးဖို့ပဲဖြစ်ပြီး အဓိကက မိခင်နို့တိုက်ကျွေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူ့အဆိုအရ လူကြီးတွေဟာ အလုပ်ကိစ္စတွေရှုပ်နေတဲ့အတွက် မိဘတွေဟာ ကလေးတွေကို နို့မှုန့်နဲ့ အသင့်စားခေါက်ဆွဲခြောက်တွေသာ ကျွေးမွေးကြတဲ့အတွက် ကလေးရဲ့ ကြီးထွားမှုအပေါ် ဆိုးရွားစွာ သက်ရောက်စေတယ်လို့ […]
By admin April 25, 2019 April 25, 2019 No Comments
*သင်္ချိုင်း ဆိုသည်မှာ* လူတစ်ယောက်က မေးတယ်… “ကိုဖိုးအေး ခင်ဗျား သင်္ချိုင်းထဲက မျှစ်တွေ ယူစားနေတာ မရွှံဘူးလား…? ဖြေ။ ။”ဘာရွှံမလဲကွ လူသေကောင်က ထွက်တဲ့မျှစ်မှ မဟုတ်တာ မြေကြီးထဲက ထွက်တဲ့မျှစ်ပဲ ဘာရွှံစရာရှိလဲ။ သင်္ချိုင်းဆိုတာလဲ မြေကြီးပါပဲကွာ လူတွေသမုတ်ထားလို့သာ သင်္ချိုင်းဖြစ်နေတာပါ ငါဆို ဒီသင်္ချိုင်းက ထွက်တဲ့မျှစ်တွေ စားလာတာ ကြာပါပြီ။ *သင်္ချိုင်း ဆိုသည်မှာ* လူတစ်ယောက်က မေးတယ်… “ကိုဖိုးအေး ခင်ဗျား သင်္ချိုင်းထဲက မျှစ်တွေ ယူစားနေတာ မရွှံဘူးလား…? ဖြေ။ ။”ဘာရွှံမလဲကွ လူသေကောင်က ထွက်တဲ့မျှစ်မှ မဟုတ်တာ မြေကြီးထဲက ထွက်တဲ့မျှစ်ပဲ ဘာရွှံစရာရှိလဲ။ သင်္ချိုင်းဆိုတာလဲ မြေကြီးပါပဲကွာ လူတွေသမုတ်ထားလို့သာ သင်္ချိုင်းဖြစ်နေတာပါ ငါဆို ဒီသင်္ချိုင်းက ထွက်တဲ့မျှစ်တွေ စားလာတာ ကြာပါပြီ။ ကြည့်စမ်း […]
By admin April 24, 2019 April 24, 2019 No Comments
( For Zawgyi ) ခြေညှိုးက ခြေမထက် ပိုရှည်နေတဲ့သူဆို ဒါကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ပါ ခြေညှိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ သူတွေကတော့ အောက်ပါ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီသူတွေပဲ ဖြစ်တာ တွေ့ရမှာပါ..။ ၁။ အချစ်ကြီးတယ် အစွဲအလမ်းကြီးတယ် ခံစားလွယ်တယ်..။ ၂။ အငြိုးကြီးတယ် ရန်ငြိုး ထားတတ်တယ်..။ ၃။ ချစ်သူကို ဦးစားပေးတယ် ချစ်သူကိုလည်း အနိူင်ယူတယ်..။ ၄။ ချစ်ပြီဆို ဘယ်လိုတားတား ဇွတ်ချစ်တယ် မုန်းပြီးဆို လုံးဝ လှည့်မကြည့်ဘူး..။ ၅။ စကားပြောတည်တယ် ခင်သွားရင် ပေါတောတော လုပ်တတ်တယ်..။ ၆။ အိမ်မှာ ဘုရင် အပေါင်းအသင်းကြား သူမပါမပြီး..။ ၇။ သူများ အားမကိုးတတ်ဘူး အကူအညီ ယူပြီးရင်လည်း ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ မမေ့တတ်ဘူး..။ […]
နီးကပ်လာသော တဘောင်နှစ်ခု ” နိမိတ်တဘောင်ဆိုတာ မယုံကြည်လို့မရဘူး။ခုတွေ့လိုက်ရတဲ့ တဘောင်ကို လေ့လာကြည့်ရင် မှန်သင့်သလောက်မှန်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ၅၆၇ ဝယ် ရေတွေကြီးလို့၈ ဆုံးမြေကြီး လှု ပ်လိမ့်မယ် ၉ ဝယ်မြေခါ သွက်သွက်ရမ်းလို့အကြမ်းစားကြီး လှု ပ်လိမ့်မယ် ၃ ကို အစဉ်ဆောင် ၅ ကို ထိမ်းလို့ကပ်စိမ်းကြီးကို ကျော်ကြမယ် ကျော်ကြကွယ် ကျော်ကြကွယ် မကြာခင် သေချာလာပါမယ်။ အပေါ်ကတဘောင်အရဆိုရင် ” ၅၆၇ ဝယ်ရေတွေကြီးလို့ ” ဆိုတာ ၂၀၁၅/၁၆/၁၇ မှာ ရေတွေကြီးလို့ ဆိုလို တာလို့ ယူဆပါတယ်။ တကယ်လဲ ရေတွေကြီးခဲ့တယ်။ ” ၈ ဆုံးမြေကြီးလှုပ်လိမ့်မယ် ” […]